नेपाल आज | नारायणकाजीसँग नारायण पौडेलले गरेको यौन बहश, भने–म व्रम्हचारी होईन !
मङ्गलबार, ३० मङि्सर २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नेपालका अविवाहीत नेताहरु मध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि एक हुन् । उनले जिवनभर विवाह नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । तर, आफु व्रम्हचारी चाहिँ नभएको भन्दै यौनलाई जिवनको अभिन्न अंगका रुपमा स्विकार गरेका छन् ।
श्रेष्ठले केहि समयअघि नारायण पौडेलले संचालन गरेको एउटा टेलीभिजन कार्यक्रममा आफुले विवाह नगर्ने प्रण गरेको तर, व्रम्हचारी भने नभएको वताएका छन् ।
गणतन्त्रको सन्दर्भमा श्रेष्ठले आयोजना गरेको रिसेप्सन पार्टीलाई उदाहरण दिएर प्रस्तोता पौडेलले ‘जीवन साथी पनि भएको भए अझ वढि उत्तम हुन्थ्यो भन्दै चर्चा चल्यो नी ?’ भन्दै सोधेको प्रश्नमा श्रेष्ठले भनेका छन्–‘यो जिवनको एउटा पक्ष हो। आम मान्छे र मित्रले त्यसरी सोच्नुलाई नराम्रो मान्दिन। वरु सुभेच्छुकहरुले सोचेको हो भन्ने मान्छु । तर, मेरो कालखण्ड जसरी गुज्रीयो, अव मैले निर्णय गरिसके वैवाहिक जिवनमा जाँदीन।’
पौडेलको ‘तपाई व्रम्हचारी हो ?’ भन्ने प्रश्नमा भने उनले घुमाउरो जवाफ दिएका छन् । ‘होईन, म अविवाहित हुँ’ उनले भनेका छन्–‘व्रम्हचारी भनेको चलनचल्तीमा यौन सम्वन्धवाट पर भन्ने वुझिन्छ । त्यो भन्दा पनि दार्सनिक रुपमा व्रम्हचार्यको अर्थ गम्भिर छ । त्यसैले म व्रम्हचार्यको समग्र पक्षमा प्रवेश गरेर व्रम्हचारी हुँ भन्न सक्दिन।
‘तपाईसँग यौन अनुभव छ की छैन ?’ भन्ने प्रश्नमा भने श्रेष्ठले जेलिएको जवाफ दिएका छन्। उनी भन्छन्–‘यौन अनुभवको सार्वजनिक चर्चा गरिरहनु पर्ने आवश्यक्ता म ठान्दिन।’ तर, यो धेरैको चासोको विषय हो र तपाईलाई आपत्ति हुँदैन भने... ? भन्दै पौडेलले जवाफ फुत्काउने प्रयास गर्दा पनि उनले सिधा जवाफ दिएका छैनन् । ‘यौन चै मानव जिवनको एउटा महत्वपुर्ण अंग भएको कारणले मानिसहरुले यसलाई चर्चा गर्नु र वुझन खोज्नुलाई अस्वभाविक म मान्दिन। तर, यो चै नितान्त ब्यक्तिगत मामला हो’– उनले भनेका छन् ।
पौडेलले ‘तपाईसँग अनुभव छ÷छैन भनेर मानिसलाई कौतुहलता पनि छ’ भन्दै अझै जोड गरेपछि पनि श्रेष्ठको जवाफ उही नै हुन्छ–‘मैले भनेनी, यो विषयमा अहिले सार्वजनिक चर्चा नगरिरहनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्या छ।’
एक्लो जिन्दगी वाँच्नुलाई भने उनले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणवाट लिएका छन् । ‘त्यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन् जस्तो लाग्छ, त्यसकारणले म त्यो जिवन वाँची राख्या छु’ उनी भन्छन्–‘तर, स्भाविक रुपमा त्यसका केहि सिमाले पनि कहिले काहीँ चाहिँ ‘यो के हो’ भन्ने प्रस्न उब्जाउँदो हो। उब्जाउँछ पनि । तर, मुलभुत रुपमा चै म त्यसवाट सन्तुष्ट छु।’
आफनो पनि जिवन साथी होस भनेर आफुलाई कहिलै नखड्केको उनले वताएका छन् । ‘तर, मान्छेहरुले मलाई सधै एउटा कुरामा दवाव दिन्छन् । जो भेटे पनि । विवाह गर्नुपर्छ, विवाह गरौ भनेर’ उनले अगाडि भनेका छन्–‘पहिला त अध्यक्ष कमरेडले र सिता भाउजुले (पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पत्नि सिता दाहाल) मलाई धेरै भन्नु हुन्थ्यो । अहिले त धेरै कम भा’छ। किनकी मैले पब्लिक्ली त्यो कुरा भन्न थालेपछि वहाँहरुले त्यो कुरा छोड्नु भा’छ। र अरु साथीहरुले पनि धेरैले छोड्नु भाको छ ।’
तर, अहिले पनि विवाहको कुरालाई लिईर धेरैले झसंग पार्ने गर्नु भएको उनले वताएका छन् । ‘मुलभुत रुपमा त मँ यसरी नै जिवन विताउन सकिन्छ भनेर नै लाग्या हुनाले मलाई त्यस्ले तेती ठुलो प्रभाव त पारि हाल्दैन। तर, अहिले त ठिकै छ, पछाडि गएपछि गाह्रो हुन्छ है गाह्रो... भनेर त्यस्तो भन्ने गर्दा खेरी चै कहिले काहीं झसक्क हुन्छ।’
‘सुशिल कोईरालालाई अन्तिम अवस्थामा हेर्ने कोहि भएन भन्ने चर्चा हुन्छ। भोलीका दिन सम्भिदा...’ भन्दै पौडेलले उनलाई साथ दिँदा श्रेष्ठले हाँसेर उनको कुरामा सहमति जनाएका छन् ।